I-Optimizely Intelligence Cloud: Ungayisebenzisa Kanjani Injini Yezibalo Ku-A / B Test Smarter, Futhi Ngokushesha | Martech Zone
NgoLwesibili, Agasti 24, 2021 NgoLwesibili, Agasti 24, 2021 URyan Lucht
Uma ufuna ukusebenzisa uhlelo lokuhlola ukusiza ukuhlolwa kwebhizinisi lakho nokufunda, amathuba owasebenzisayo I-Optimizely Intelligence Cloud - noma okungenani usibhekile. I-Optimizely ingelinye lamathuluzi anamandla kakhulu emdlalweni, kepha njenganoma yiliphi ithuluzi elinjalo, ungalisebenzisa ngokungalungile uma ungaqondi ukuthi lisebenza kanjani.
Yini eyenza i-Optimizely ibe namandla kangaka? Ingqikithi yesethi yayo yesici ilele kunjini yezibalo enolwazi kakhulu futhi enembile kuthuluzi lomuntu wesithathu, ekuvumela ukuthi ugxile kakhulu ekutholeni izivivinyo ezibalulekile bukhoma - ngaphandle kokukhathazeka ukuthi uhumusha kabi imiphumela yakho.
Ngokufana nesifundo esiyimpumputhe sendabuko kwezokwelapha, A / B ukuhlolwa sizokhombisa ngokungahleliwe okuhlukile zokwelapha yesiza sakho kubasebenzisi abahlukahlukene bese uqhathanisa ukusebenza kokwelapha ngakunye.
Izibalo-ke zisisiza ukwenza izinkomba mayelana nokuthi lokho kwelashwa kungasebenza kangakanani esikhathini eside.
Iningi lamathuluzi wokuhlola i-A / B ancike kolunye lwezinhlobo ezimbili zesibalo sezibalo: Izibalo ze-Frequentist noma ze-Bayesian. Isikole ngasinye sinezinzuzo nezingozi ezahlukahlukene - Izibalo zama-Frequentist zidinga ukuthi kusetshenziswe usayizi wesampula ngaphambi kokwenza ucwaningo, futhi izibalo zaseBesesian zikhathalela kakhulu ukwenza izinqumo eziqondisayo ezinhle kunokucacisa noma yisiphi isibalo somthelela, ukusho izibonelo ezimbili. Amandla amakhulu ka-Optimizely ukuthi yilona kuphela ithuluzi emakethe namuhla ukuthatha ifayela le- umhlabeleli womhlaba womabili sondela.
Umphumela wokugcina? I-Optimizely inika amandla abasebenzisi ukuthi baqalise izivivinyo ngokushesha okukhulu, ngokuthembakalayo, nangokunembile.
Ukuze usebenzise ngokugcwele lokho, noma kunjalo, kubalulekile ukuqonda ukuthi kwenzekani ekusithekeni. Nayi imininingwane namasu ama-5 azokutholela ukuthi usebenzise amandla we-Optimizely njengochwepheshe.
Isu # 1: Qonda Ukuthi Akuwona Wonke Amamethrikhi Adalwe Alingana
Kumathuluzi amaningi okuhlola, inkinga evame ukunganakwa ukuthi lapho amamethrikhi amaningi owengeza futhi uwalandela njengengxenye yohlolo lwakho, maningi amathuba okuthi ubone iziphetho ezingalungile ngenxa yengozi engahleliwe (ezibalweni, lokhu kubizwa ngokuthi “inkinga yokuhlola eminingi ”). Ukuze ugcine imiphumela yayo ithembekile, i-Optimizely isebenzisa uchungechunge lwezilawuli nokulungisa ukugcina izingqinamba zalokho kwenzeka ziphansi ngangokunokwenzeka.
Lokho kulawulwa nokulungiswa kunemiphumela emibili lapho uya ukusetha izivivinyo ku-Optimizely. Okokuqala, imethrikhi oyikhethile njenge- Imethrikhi eyinhloko izofinyelela ukubaluleka kwezibalo ngokushesha okukhulu, zonke ezinye izinto zihlala njalo. Okwesibili, amamethrikhi amaningi owengeza esivivinyweni, amamethrikhi wakho wakamuva azothatha isikhathi eside ukufinyelela ukubaluleka kwezibalo.
Lapho uhlela ukuhlolwa, qiniseka ukuthi uyazi ukuthi iyiphi imethrikhi ezoba yiNyakatho Yakho enqubweni yakho yokwenza izinqumo, yenze leyo Metric yakho Yokuqala. Ngemuva kwalokho, gcina lonke uhlu lwakho lwamamethrikhi luxhomekile ngokususa noma yini engadingekile noma ebucayi.
Isu # 2: Zakhele Izimfanelo Zakho Ngokwezifiso
Ngokufanelekile kuhle ukukunikeza izindlela eziningana ezithokozisayo nezilusizo zokuhlukanisa imiphumela yakho yokuhlolwa. Isibonelo, ungabheka ukuthi ukwelashwa okuthile kusebenza kangcono yini kudeskithophu kuqhathaniswa neselula, noma ubone umehluko emithonjeni yethrafikhi. Njengoba uhlelo lwakho lokulinga lukhula, uzosheshe ufise amasegimenti amasha - lokhu kungacaciswa esimweni sakho sokusebenzisa, njengamasegmenti esikhathi esisodwa uma kuqhathaniswa nokuthengwa kokubhalisile, noma njengokujwayelekile “njengezivakashi ezintsha ezibuyayo” (okuthi, ngokusobala, asikwazi ukuthola ukuthi kungani lokho kunganikezwa ebhokisini).
Isu # 3: Hlola i-Optimizely's Stats Accelerator
Isici sethuluzi lokuhlola esivame ukubizwa ngokweqile yikhono lokusebenzisa “izigcwelegcwele ezihlomile eziningi”, uhlobo lwe-algorithm yokufunda ngomshini eshintsha ngamandla lapho ithrafikhi yakho yabelwa khona phakathi nesilingo, ukuthumela izivakashi eziningi “ekuwineni” ukwehluka ngangokunokwenzeka. Inkinga ngabaphangi abahlome ngezikhali eziningi ukuthi imiphumela yabo ayizona izinkomba ezinokwethenjelwa zokusebenza kwesikhathi eside, ngakho-ke icala lokusetshenziswa kwalezi zinhlobo zokuhlolwa likhawulelwe ezimweni ezibucayi zesikhathi njengokukhushulwa kokuthengisa.
Ngokufanelekile, nokho, kunohlobo oluhlukile lwe-bandit algorithm etholakalayo kubasebenzisi abasezinhlelweni eziphakeme - Izibalo Esheshayo (manje esaziwa ngokuthi inketho ye- "Accelerate Learnings" ngaphakathi kwamaBandits). Kulokhu kusetha, esikhundleni sokuzama ukwaba ngamandla ithrafikhi ekushintsheni okwenza kahle kakhulu, i-Optimizely yabela ithrafikhi ngokuhluka okungahle kufinyelele ekubalulekeni kwezibalo ngokushesha okukhulu. Ngale ndlela, ungafunda ngokushesha, futhi ugcine ukuphindeka kwemiphumela yokuhlolwa yendabuko ye-A / B.
Isu # 4: Faka ama-emoji kumagama akho wemethrikhi
Uma uthi nhlá, lo mqondo mhlawumbe uzwakala ungekho endaweni, noma ungaphakathi. Kodwa-ke, into ebalulekile yokuqinisekisa ukuthi ufunda imiphumela efanele yokuhlolwa iqala ekuqinisekiseni ukuthi izethameli zakho ziyawuqonda umbuzo.
Kwesinye isikhathi ngaphandle kwemizamo yethu emihle, amagama emethrikhi angadideka (linda - ingabe lowo mlilo uyasebenza lapho i-oda lamukelwa, noma lapho umsebenzisi ehlasela ikhasi lokubonga?), Noma ukuhlolwa kunamamethrikhi amaningi kakhulu ehla enyuka nemiphumela ikhasi liholela ekulayisheni okuphelele kwengqondo.
Ukungeza ama-emojis kumagama wakho wamamethrikhi (okuqondiwe, amaka wokuhlola aluhlaza, noma isikhwama esikhulu semali kungasebenza) kungaholela kumakhasi askena kakhulu.
Sithembe - ukufunda imiphumela kuzozwakala kulula kakhulu.
Isu # 5: Cabanga kabusha ngeleveli yakho yokubaluleka kwesitatimende
Imiphumela ithathwa njengecacile kumongo wesilingo se-Optimizely lapho ifinyelele ukubaluleka kwezibalo. Ukubaluleka kwezibalo kuyigama elinzima lezibalo, kepha empeleni kungenzeka ukuthi ukubheka kwakho kungumphumela womehluko wangempela phakathi kwabantu ababili, hhayi nje ithuba elingahleliwe.
Amazinga wokubaluleka we-Optimizely abikiwe ngokufanelekile “ahlala esebenza” ngenxa yomqondo wezibalo obizwa ukuhlolwa okulandelanayo - lokhu empeleni kubenza bathembeke kakhulu kunamanye amathuluzi wokuhlola, athambekele kuzo zonke izinhlobo zezinkinga "zokubheka" uma uzifunda maduzane.
Kuyafaneleka ukuthi ubheke ukuthi yiliphi izinga lokubaluleka kwezibalo olibona libalulekile kuhlelo lwakho lokuhlola. Ngenkathi i-95% ingumhlangano emphakathini wezesayensi, sivivinya ushintsho lwewebhusayithi, hhayi imigomo. Okunye ukukhetha okuvamile emhlabeni wokuhlola: 90%. Kepha uzimisele ukwamukela ukungaqiniseki okuthe xaxa ukuze usebenzise izivivinyo ngokushesha futhi uhlole imibono eminingi? Kungenzeka yini ukuthi usebenzisa izibalo ezingama-85% noma ngisho nama-80%? Ukuba nenhloso ngebhalansi yomvuzo wakho wobungozi kungakhokha izinzuzo ezibonisa ngokuhamba kwesikhathi, ngakho-ke cabanga ngalokhu ngokucophelela.
Funda Kabanzi Mayelana ne-Optimizely Intelligence Cloud
Lezi zimiso ezinhlanu ezisheshayo nokuqonda kuzosiza ngendlela emangalisayo ukugcina engqondweni ngenkathi usebenzisa i-Optimizely. Njenganoma yiliphi ithuluzi, libila phansi ekuqinisekiseni ukuthi unokuqonda okuhle kwakho konke okwenziwe ngokwezifiso ekusithekeni, ngakho-ke ungaqiniseka ukuthi usebenzisa leli thuluzi kahle nangempumelelo. Ngalezi ukuqonda, ungathola imiphumela ethembekile oyifunayo, lapho uyidinga.
Tags: izimfaneloizimfanelo ngokwezifisoi-emojiukuhlolwaamamethrikhingokugcweleNgokuhlakanipha ifu lobuhlakaniimethrikhi eyinhlokoamamethrikhi ayinhlokoukuhlolwa okulandelanayoukubaluleka kwezibaloizibalo acceleratortestingukuhlola izimfaneloukuhlolwa kwamamethrikhiukuhlolwa kwewebhu
Ngaphambi kokujoyina Ama-Cro Metrics, unikeze insizakalo yokumaketha ngokugcwele eqhuba uhlelo lokuhlola oluphumelelayo njengoMqondisi Wezokumaketha eBig Interview. URyan uletha iso elibukhali, ukuqonda okujulile kwengqondo yomsebenzisi, nobuciko obunomdlandla ekusebenziseni kahle iqembu leCro Metrics.